Devozione del giorno: il sacrificio della Vergine Maria | PREGHIERA&NEWS
Nsọpụrụ ụbọchị: onyinye nke Virgin Mary
Paolo Tescione	Edere ya November 21, 2020 November 21, 2020
Afọ nke àjà Meri. Joachim na Anna kwenyere na ha duuru Meri gaa n'ụlọ nsọ. Nwa nwanyi ato; na Virgin, enwegoro ikike nke iji uche eche echiche na ikike ichoputa ihe oma na ihe kachasi nma, ebe ndi ikwu ya nyefere ya onye nchu aja, rara onwe ha nye Onye-nwe, ma doo ya onwe ya nsọ. afọ atọ ... Kedụ oge ịdị nsọ ya malitere! ... Kedu afọ ị malitere? You chere na ọ bụ ngwa ngwa ugbu a?
Ofzọ nke aja Mary. Mkpụrụ obi na-emesapụ aka adịghị egbu onyinye ha. N’ubọchi ahu Meri ji aru-ya kwere nkwa idi-ọcha dika onyinye nke aru-ya n’iru Chineke; ọ chụrụ aja ya n’echiche nanị Chineke; ọ chụrụ obi ya n'ikwe na-enweghị onye hụrụ ya n'anya ma e wezụga Chineke; ọ na-achụrụ Chineke ihe nile site na njikere, na mmesapụ aka, yana ọ joyụ ịhụnanya. Lee ihe atụ magburu onwe ya! Nwere ike i imitateomi ya? Nso ke ntatubọk ke afo esida ekpri n̄waidem oro ọwọrọde fi adi ke usen?
Ọnwụ nke àjà. Meri nyefere onwe ya n’oge Chineke ka bụ obere nwata, ọ hapụghịkwa ya ọzọ. Ọ ga-ebi ndụ ọtụtụ afọ, ọtụtụ ogwu ga-amata ya, ọ ga-abụ Nne nke iru uju, ma obi ya, ma n’ụlọ-nsọ, ma na Nazaret ma na Calvary, ga-anọgide na-adịgide mgbe niile n’ime Chineke, rara onwe ya nye Chineke; na ebe obula, oge ma obu onodu, onwere ihe ozo ichoro ma echicho Chineke.
OMUME. - Were aka gi nyefee Jisos n’aka Meri; gụrụ Ave maris stella.
Nke gara aga Post Gara aga post:Tugharia uche na nsogbu ndi itule gi na njem okwukwe gi
Next Post → Post ozo:Otu onye ụkọchukwu nke ụka: Onye ụkọchukwu popu na-akwadebe ịhọpụta kadinal